janvier 2014 – filazantsaramada
Seminera Fampiofanana faharoa tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana (SPaFi) Raha tsiahivina fohy dia ny volana Aprily 2013 no nanatontosana ny Seminera antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” voalohany tany amin’ny Synodam-Paritany Fisakana. Araka ny fangatahan’ny raiamandreny Pastora Randrianandrasana Daniel izay sady Mpitondra Fitandremana Andraimasina no sady Tonian’ny Tafika Masina Maharitra (TMM) SPaFi dia nahazo ny anjarany […]
Publié parfilazantsaramada janvier 31, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
« Ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dàlana Izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy, afa tsy ravina ihany; dia hoy Izy taminy: Aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. » Matio 21:19 « Fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: […]
Publié parfilazantsaramada janvier 31, 2014 février 14, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Mitoetra ao amin’ny finoana
« Finoana no naneken’i Abrahama, rehefa nantsoina, hiainga hankany amin’izay tany ho azony ho lova; ka dia niainga izy, nefa tsy fantany izay alehany. » Heb 11:8 Ny zavatra mbola tsy fantatra no mila finoana, ny zavatra mbola tsy hita no mitaky finoana. Abrahama nirahin’Andriamanitra hankany amin’ny tany tsy mbola fantany, ary niainga izy noho ny fankatoavany […]
Publié parfilazantsaramada janvier 24, 2014 janvier 27, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPANDOVA NY FAHAMARINANA ARAKA NY FINOANA.
« Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro ny andro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona » Jaona 9:4. Ny taona 2000 no niorina teto Madagasikara ny Feon’ny Filazantsara (FF) ka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no isan’ireo sehatra nanombohana ny asa voalohany. Natao ho maimaimpoana hatramin’izao izany ho […]
Publié parfilazantsaramada janvier 23, 2014 janvier 23, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana. (FSMI)
ILAY TENA RANO VELONA
« Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan’ Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona. »(Jaona 4:10) Io tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 4:10 io indray no entintsika milomano ao anatin’ny Jaona 4:1-26 manontolo. Dia hitantsika ao, araka izany tokoa fa resaka rano […]
Publié parfilazantsaramada janvier 17, 2014 janvier 17, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ILAY TENA RANO VELONA
NY HERIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.
« Ary tamin’izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny Lanitra. » Matio 4:17 Fanomanana an’i Jesosy talohan’ny niatrehany ny asa: Ary Jesosy nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, mba halain’ny devoly fanahy. Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany, dia noana. Tsy zavatra […]
Publié parfilazantsaramada janvier 10, 2014 janvier 10, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY HERIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.
Lycée Nanisana; nankalaza ny Krismasy 2013
Nifampitantana am-pifaliana ny rehetra fa teraka ho antsika ny Mpamonjy Niara-nankalaza ny Krismasy ireo klioba miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana (UNESCO, GBU, Feon’ny Filazantsara, Kabary, Dessin …) ny 19 Desambra 2013 lasa teo. Tamin’izany dia samy naneho ny talentany avy ireo klioba tsirairay. Isan’ireo mpandray anjara mavitrika ihany koa moa ny klioba Feon’ny Filazantsara […]
Publié parfilazantsaramada janvier 9, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Nanisana; nankalaza ny Krismasy 2013
NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA SY NY TOETRAN’NY MPANOMPONY
» Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena. » Jaona 3:30 Tenin’i Jaona Mpanao batisa io teny io. Entiny manambara an’i Jesosy, sy ny tenany. Jesosy Izay voalaza ao amin’ny Jaona 1: dia Ilay Teny tamin’ny voalohany, Ilay Teny tao amin’Andriamanitra, ary dia Andriamanitra Izy, ary Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Tsy […]
Publié parfilazantsaramada janvier 3, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA SY NY TOETRAN’NY MPANOMPONY